Ahịa maka iduga na Powerpoint? | Martech Zone
Ahịa maka iduga na Powerpoint?
Wednesday, May 13, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ mgbe 10PM ama na m ka na-etinye ọnụ a ngosi maka ndị ahịa echi. N'ime afọ ole na ole gara aga, emeela m ọtụtụ ngosi - yana ọtụtụ awa etinye na nke ọ bụla. A oké ngosi nwere ike na-emepụta ọtụtụ na-eduga ná na nzukọ na tradeshows… ma ndị ọzọ nke oge na ozi na-abụkarị dị achịkọta ájá. Ruo ugbu a!
Kwa oge, ezitere m ihe ngosi na Slideshare nke mere na m nwere ike ịkekọrịta ha na blọọgụ m, Facebook, ma ọ bụ LinkedIn.
Nke a nwere ike ịbụ akụkọ ochie nye ụfọdụ, mana achọtara m ihe pụrụ iche na Slideshare, agbanyeghị, nke ahụ ga-enyere ụlọ ọrụ dị ka m aka ịchụpụ ndị ruru eru site na ịkwalite nkwupụta Powerpoint ha na Slideshare. Ọrụ mkpọsa na-enye gị ohere ịnakọta ozi ndu ma budata ya na $ 1 kwa ụzọ ($ 4 na nọmba ekwentị).
Nke a bụ ụzọ na-adọrọ mmasị nke monetizing ngwa gị ma bụrụ mmeri maka azụmaahịa yana Slideshare. Cheedị ma ọ bụrụ Youtube kwere ka ụlọ ọrụ mee nke a! Tinye oku buru ibu ka ị rụọ ọrụ na njedebe nke vidiyo nke na-enye ndị na-ekiri ohere ịpị na saịtị gị, echekwara m na ụlọ ọrụ ga-edebanye aha na ìgwè atụrụ! Arụ ọrụ ahụ siri ike - ịnwere ike ịtọlite ​​mkpọsa maka ngosipụta akọwapụtara, ngosipụta na mkpado akọwapụtara, ma ọ bụ gafee akaụntụ gị niile.
Anyị na-anwale ọrụ ndu na Compendium Blogware iji hụ ka ha ruru eru. Anyị nwere nchekwube na ngosipụta ziri ezi ga-adọta atụmanya ziri ezi nye anyị ka anyị wee zụta otu narị ụzọ ma ọ bụ ịhụ.
Tags: edungosingosi na-edugaslidesharendu slideshare
Igodo 10 maka ihe ịga nke ọma maka azụmahịa nke na-ewere Social Media